Gaafa manaa bahu jalqabuma duraa Oromia Shall be Free |
bilisummaa May 3, 2013	Comments Off on Gaafa manaa bahu jalqabuma duraa
Haadhaa fi abbaa obboleeyyan mara
Ollaa fi ganda ahliidhaa fi fira
Osoo hin jaalatin sosssobachaa garaa
Dirqamuma ta’eef ka’ee bu’e karaa.
Amna jalqabuuf galaa sinqeeffatee
Manguddoof jaarsooliin eebba eebbifatee
Ijoollee biyyaa fi-qabuun hammatee
“Abshiir jajjabaadhaan” dhaamsa dabarsatee
Osoo ijji boochuu imimmaan haqatee
Takka tarkaanfatuun if duuba mil’atee
Harka hafarsuun nagaya dhaammate.
Ifumaan dubbachuun if keessat-guungumee
Kaayyoo manaa baheef ifiin ifitti himee
Galmaan akka gahu fuuldurat-tilmaamee
Firii argamsiisuuf amna dheeraa deeme.
Akka bakkaan gahu abdiin jala muree
Laggeenii fi gaarreen tulluudhaa fi raaree
Hunda qaxxaamuruun hallayyaa fi qarree
Qorraa-aduun janne ganamaa fi waaree
Dukkana cillimiin obsuun dhagaaf qoree
Bineeyyii hahhamoo miliqee irraa goree
Rakkoo beelaaf dheebuu ciniinnachaa sabree
Irra hin kaayyanne yoo lubbulleen dabre;
Kaayyoo kaayyeeffateet arguu saba furee.
Bu’aa ba’ii meeqaan oliif gad meeratee
Mukkeen adda addaa kan arge sooratee
Yoo dhabellee dhiisee obsuun ciniinnatee
Bineensa bosonaa hiriyaa godhatee
Qorra hamadayaan baala haguuggatee
Abdii osoo hin kutin daranuu onnatee
Qananii jireenyaa achuma godhate.
Qabeenya horatee jiraachuu hin dadhabne,
Bultii ijaarratee ilmaan horuu hin yaanne,
Sodaa diinaatiif mataa gad hin qabne,
Rakkoo itti galteef harka hin kannine,
Bu’aa ifii laalee lammii isaa hin ganne,
Roorroo adawwiitiif sabarraa hin baqanne
Lubbuu isaa takkittii isaaniif if kanne.
Inni suni goota goota Oromootii
Kan saba dammeeysee qabsaawe dhugatti
Kan lubbuu isaa dhabe daandii haqaarratti
Wareegamni isaanii wareega seenaatii;
Kanumaaf yaadanna baraa fi baratti.
Sirna gita bittaa fonqolchuuf muratee
Bilisummaa arguuf hawwiidhaan tashatee
Galii osoo hin argin kan lubbuunsaa baate
Dhugaaf manaa bahuun dhugarratti kutee
Arra Oromoonnis isaanumaan boontee
Kanumaaf bara-baraan wal gahuun yaadatte.
Daandii haqaa saaquun nutti garsiisanii
Addaan hin baanuun gurmuun tokkoomanii
Waliin wal qabachuun walumaan dhumanii
Dhaloota ammaatiif fakkeenya tahani.
Tasa hin hifanne hin sodaanne diina
Tirachaati ture qabsoo teenya tanaa
Gootoota qaqqaalii kanneen nuuf gaachanaa
Wabii bilisummaati isaanumaan boonnaa
Dagatamuun-tahan barayyuu yaadanna.
Tags najiib walaloo zannuub
Previous Hiriira Hawaasaa Oromoo magaalaa muummitttii Osloo biyya Noorweey
Next Ethiopia: Terrorism Law Decimates Media